Warshadda Tee Mechanical Tee ee Shiinaha oo Qallalan | Zhihua
Badeecadani waa nooc ka mid ah tee-farsameedka jeexjeexan, kaas oo loo isticmaalo sidii isku-xiraha kala-goynta qaab-koore ah ee loogu xirayo tuubooyinka laanta hal dhinac ka dib daloolka dhexda ee tubbada toosan. Tuubooyinka laanta waxay ku xiran yihiin jeexdin.
Cabirka: 3 "(DN80) - 8" (DN200)
Heerka Naqshadda: ISO6182 、 AWWA C606 、 GB 5135.11
Heerka Xiriirka: ASME B36.10 、 ASTM A53-A53M, ISO 4200
Cadaadiska Shaqada: 175PSI-300PSI
sii wad si aad u sii wanaajiso, si aad u hubiso in tayada badeecaddu u sarreyso si waafaqsan shuruudaha suuqa iyo macaamilka. Shirkaddayadu waxay leedahay barnaamij dammaanad aad u fiican oo durba loo aasaasay ilaha Warshadda Ductile Iron U-Bolted Mechanical Tee oo loogu talagalay La-Dagaalanka Shiinaha Soo-saaraha dunida oo dhan. Waxaan u malaynayaa inaan ku qancin doonno adiga Waxaan sidoo kale si diiran u soo dhaweyneynaa macaamiisha inay soo booqdaan qeybta wax -soo -saarka oo ay iibsadaan alaabtayada.
Ilaha warshadda Shiinaha Ductile U-Bolted Mechanical Tee, UL/FM Mechanical Tee Tee, Waxaan raacnaa mabaadi'da maareynta ee "Tayada ayaa ka sarreysa, Adeeggu waa kan ugu sarreeya, Sumcaddu waa tan ugu horreysa", oo si daacadnimo leh ayey u abuuri doontaa oo ula wadaagi doontaa guusha dhammaan macaamiisha. Waxaan kugu soo dhaweyneynaa inaad nala soo xiriirto si aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo aan rajeyneyno inaan kula shaqeyno.
Hore: Tee Farsameysan oo dunta ah
Xiga: Dhammaad Furka